महाभारतको युद्धका लागि श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्र नै किन रोजे ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
महाभारतको युद्धका लागि श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्र नै किन रोजे ?
यो कुरा त तपाईलाई थाहा नै हो कि, महाभारको युद्धका बेला श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गीताको उपदेश दिएका थिए । तर आज पनि महाभारतसँग जोडिएका केहि यस्ता रहस्य छन्, जसको बारेमा कमै मानिसलाई मात्र थाहा छ । के तपाईले कहिल्यै महाभारतको युद्धका लागि कुरुक्षेत्र नै किन छानियो भनेर सोच्नुभएको छ ? यदि छैन भने थाहा पाइराख्नुहोस् ।
महाभारतको युद्ध संसारको सबैभन्दा ठूलो युद्ध थियो । कौरव र पाण्डवको बीचमा भएको यो युद्धमा दुवै तर्फका करोडौँ योद्धा मारिएका थिए । महाभारतको युद्ध भन्दा पहिला न त यस्तो युद्ध भएको थियो, न त हुने सम्भावना छ । कुरुक्षेत्रको धर्तीलाई महाभारतको युद्धका लागि भगवान श्रीकृष्णले नै चुनेका थिए । तर कुरो उनले महाभारतका लागि अन्य स्थान नचुनी किन त्यहि क्षेत्र चुने भन्ने हो ।यसको पछि एउटा गहिरो रहस्य रहेको छ । शास्त्रका अनुसार महाभारतको युद्ध जब तय भयो तब, दुर्योधनले पाण्डवलाई पाँच पाइला जमीन पनि नदिने निर्णय गर्यो । भगवान श्रीकृष्ण युद्धबाट धर्तीमा बढीरहेको पाप मेटाउन चाहन्थे र धर्मको स्थापना गर्न ।
मान्यताका अनुसार, महाभारतको युुद्धभन्दा पहिला श्रीकृष्णलाई आफ्ना गुरु, दाजुभाई मरिरहेको देखेर पाण्डव र कौरव एकआपसमा सन्धि गर्छन् कि भन्ने डर थियो । जसका लागि उनले यस्तो भूमी चुन्ने फैसला गरे, जहाँ क्रोध र द्वेष धेरै मात्रामा होस् । श्रीकृष्णले यस कामका लागि आफ्ना दूतलाई सबै दिशामा पठाएका थिए । र त्यहाँ भइरहेका घटनाको बारेमा बताउन भने । दूतले त्यसै गरे । उनलाई एक दूतले भने, कुरुक्षेत्रमा एक भाईले अर्को भाईलाई खेतको पानीको विषयमा भएको झगडालाई लिएर मारिरहेको थियो ।
त्यहाँ एक भ्यागुतोले प्वाल पारेको रहेछ, र त्यहाँबाट दाजुको खेतमा पानी जाँदो रहेछ, भाईले भनेँ पानी चोरेको भनेर चक्कूले रोपिदियो र दाजुको शवलाई घिसार्दै त्यहि प्वास नजिक लगेर फालिदिँदै बगेको पानी रोक्यो । त्यसपछि उक्त क्षेत्र नै कृष्णले महाभारतका लालगि उचित ठाने । गुरु,चेला, दाजुभाईबीच युद्ध गराउनका लागि यो क्षेत्र यचित रहेको सोचेपछि मात्रै उनले कुरुक्षेत्रमा युद्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए ।